ओसाका देखि Himeji सम्म - कसरि ओसाका देखि Himeji सम्म जाना? - Samurai and Ninja in Japan
ओसाका देखि Himeji सम्म – कसरि ओसाका देखि Himeji सम्म जाना?
कसरी ओसाकाबाट Himeji सम्म जानुहोस्? Shinkansen छिटो रेल र अन्य ट्रांसटिनटिन विकल्पहरू
ओसाका सम्म हेमीजीबाट जाने सबैभन्दा उत्तम तरिका शंकसेन्सन छिटो रेल छ। शंकसेन्सेन छिटो रेलको लागत (ओसाका-हेमेमिजी) एक- राउण्डको लागि 3130 डलर रहेको छ । राउण्ड ट्रिपको लागि लागत लगभग 6260 छ । ओसाका-हेमेमी शंकसेन्सनको सवारी लगभग 30 मिनेट छ। पहिलो शंकसेन्सन छिटो रेल 6:30 पूर्वाह्न ओसाकाबाट प्रस्थान गर्दछ । अन्तिम शंकसेन्सन छिटो रेलमा ओसाकाबाट 23:25 बजे प्रस्थान गर्दछ। त्यहाँ हरेक 10 मिनेटको शंकसेन्सन बुलेट ट्रेन सेवा छ । तपाइँ अनलाइन रिजर्भ गर्न सक्नुहुनेछ तर यो स्टेशनमा टिकट खरीद गर्न अधिक सुविधाजनक छ।
Shinkansen फास्ट रेलवे देखि ओसाका सम्म Himeji
Categoriesब्लग Nepali TagsShinkansen को यात्रा फास्ट रेलगाडी, ओइका देखि हेमीजी सम्म, ओसाका देखि हेमीजी सम्म, ओसाका सम्म हेमीजी सम्म कसरि प्राप्त गर्ने, जापान, जापान परिवहन, जापानमा यात्रा, बुउलेट ट्रेन्स